Ahlusuna oo Guriceel ka tiri: Shirka Dhuusa Mareeb waa shir colaadeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahlusuna oo Guriceel ka tiri: Shirka Dhuusa Mareeb waa shir colaadeed
19th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Kulan ay isugu yimaadeen Saraakiisha Ahlu Sunada Gobolada Dhexe, ayaa ayaa shalay ka dhacay magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo todobaadkii hore dagaal xoog leh ka dhacay, kadibna ciidamada dowladda Soomaaliya laga saaray.
Saraakiisha, ayaa ka arrinsatay dagaalka Magaalada Guriceel, shirka ka soconaayo Magaalada Dhuusa Mareeb iyo waxa ay u arkaan iyo iyagoo Dowladda Soomaaliya ku dhaliilay, inay jebisay baaq xabad joojin ah.
Ahllsunada ku shirtay Guriceel waxay Dowladdu ku dhaliileen markii toddobaadkii hore laga saaray Magaalada Guriceel, inay dhegaha ka fureysatay baaq ahaa inaanay weerarin Guriceel, laakiin ay ku qaaday dagaal culus.
Ku Simaha Gudoomiyaha Golaha Fulinta ee Ahlu Sunada Gobolada Dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali, ayaa Saxaafadda u akhriyay qodobo uu sheegay inay ka soo saareen kualnka.
1-In Ahlu Sunna ay aqbashay xabad joojintii la kala dhex dhigay iyaga iyo Dowladda
2-In Dowladda ay jebisay xabad joojinta, markii wax-garadka ku baaqeen joojinta dagaalada
3-In Ahlu Sunna ay shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkuba ogeysiineyso inay aqbashay xabad joojinta, haddii Dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay dhaqangelineyso.
4-In shirka ka soconaayo Magaalada Dhuusa-mareeb aanu ahayn mid nabadeed, oo uu yahay mid colaadeed.
Wadaadka u hadlay Ahlsuna Waljaamaca, Sheekh Maxamed Shaakir, ayaa qaba inaysan Ahlu Sunna u qalmin in lala dagaalamo, bacdamaa ay Shabaabka ka nadiifeysay deegaanada nabdoon ee Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Magaalada Guriceel ayaa dhowr jeer isu badeshay gacmaha dowladda Soomaaliya iyo Ahlusuna Waljaamca, hase ahaatee waxey haatan ugu jirtaa Ahlusuna, halka ciidamada Soomaaliya joogaan meel ka baxsan magaalada.
Sawirro: Ciidamo loogu magacdaray Onkod oo howl bilaabay Muqdisho